Soo dejisan Microsoft Word 16.0.6131.1008 – Vessoft
Soo dejisan Microsoft Word
Microsoft Word – software caan ah si ay u abuuraan, waraaqaha aragtida iyo edit. Microsoft Word kuu ogolaanaya in aad tayo u fuliyaan dukumentiyada oo sii jirayaa on qalab kasta. Software ayaa u saamaxaaya in ay ku darto sawirada, shaxda, miisaska, qormo iyo xubno graphic SmartArt. In Microsoft Word xubno ay gacanta ku yaalaan hoose ee daaha ka badan isticmaalka habboon ee hawlaha software hal gacan. Sidoo kale software kuu ogolaanaya in aad u aragto ku lifaaqan e-mail iyo si aad u hesho helaan waraaqaha Word ka noocyo kala duwan oo storages daruur. Microsoft Word ayaa interface ah dareen iyo nidaamka navigation yaqaan kaas oo awood u user in ay si deg deg ah u yaqaaniin software ah.
Abuur, aragtida iyo edit dukumentiyada
Ku dar sawirada, miisaska, iyo waxyaalo kale oo la xiriiro
Cusboonaysii content document ka dib markii sixiddiisa on qalabka oo dhan
Comments on Microsoft Word:
Microsoft Word Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... OneNote 15.1.6319.4426
العربية, English, Українська, Français... Microsoft Office Mobile 15.0.4522.2000
Office The software rasmi ah u la shaqeeyaan waraaqaha Word, Excel iyo PowerPoint ka Microsoft ee. Codsiga ka kooban buuxda oo qalab xaalkaa documents oo kala duwan.
English, Français, Español, Deutsch... Polaris Office 7.3
Office software ah in la files Office Microsoft shaqeeyaan iyo u arkaan files PDF ah. software waxa uu ka shaqeynayaan weyn iyo tiro ka mid ah habyaalada.
Office software The si ay u abuuraan oo saxaa dokumentiyada qoraalka, barasantigareeyaan, bandhigyo iyo u arkaan files PDF ah.
العربية, English, Українська, Français... RAR 5.30.34
Files riixo Archiver ayaa file awood leh oo taageero ka ugu of qaabab archive. Software waxa uu leeyahay tiro balaadhan oo ah qalab iyo muuqaalada si loo hubiyo in shaqada wax soo saar leh archives ah.
العربية, English, Українська, Français... Facebook 46.0.0.26.153
العربية, English, Français, Español... SoundCloud 15.09.21
العربية, English, Українська, Français... Backgrounds HD 4.3.54
Desktop Software la set badan oo wallpapers jawabo, iyo tirada kala duwan. Software wuxuu taageeraa search wallpaper by rating dadka isticmaala kale oo ku wargeliyaan images cusub.